YuIP.org - သင့်ရဲ့အများပြည်သူအိုင်ပီနှင့်သင့်ပုဂ္ဂလိက IP ကိုအွန်လိုင်းကိုကြည့်ပါ။
YuIP.org ထို့အပြင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမျိုးစုံသောဆာဗာဖို့အောင်းနေချိန်စမ်းသပ်ရန်နှင့်အွန်လိုင်း Ping command ကိုပေး, ပွင့်လင်းဆိပ်ကမ်းများစစျဆေးဖို့, သင့် IP ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန် YuIP site ကိုသုံးပါ။
သင့်ရဲ့ IP ကိုပြရန်
ping command ကို
သင့် IP ဒေသခံကွန်ယက်
အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင့် IP ငါ IP address ကိုသငျသညျကိုဝင်ရောက်တိုင်းက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ကြောင်းကိုအဓိပ်ပာယျ, သင့်အများပြည်သူ IP address ကိုရည်ညွှန်းနေပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကို proxy server ကိုအများပြည်သူ IP ကို ​​အသုံးပြု. နေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ proxy ဆာဗာအိုင်ပီ၏ပရိသတ်ကိုကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
LAN ပေါ်မှာသင့် IP, ဒီသင်၏ကိုယ်ပိုင် IP လိပ်စာအတိုင်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ IP သာသင့်ဒေသခံကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်း device များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ LAN access ကိုဒီ site ပေါ်တွင်သင်၏ IP လိပ်စာကိုကြည့်ရှုရန်မဟုတ်လူတိုင်းကမြင်တွေ့နိုင်တယ်ကြောင့် Chrome ဘရောက်ဇာသို့မဟုတ် Firefox browser ကိုသုံးပြီးအကြံပြုသည်။
အိုင်ပီသည် HTTP proxy server ကိုမှတဆင့်အင်တာနက်စာမျက်နှာဝင်ရောက်ဖို့ကိရိယာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်တဲ့ IP လိပ်စာကိုကိုက်ညီထပ်ဆင့်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ proxy server ကိုသင့် IP တစ်ဆင့်ဖော်ပြရန်ဖို့မ configured ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ IP ကိုဝန်မျှတတဲ့အတွက်အသုံးပြုနေသည်ထပ်ဆင့်ပို့သောအခြားအခြေအနေများလည်းမရှိ။
သင့်ရဲ့ ISP က, ဒီလယ်ပြင်သင့်ရဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ကုမ္ပဏီဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားပါ။
ပျမ်းမျှအောင်းနေချိန်, ငါသည် website တစ်ခုမှသေးငယ်တဲ့ command ကို send and receive ရန်သင့်အင်တာနက်ပျမ်းမျှအချိန်ကိုဆိုလိုတာ။ သင်တစ်ဦးက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါဤသည်နောက်တဖန်အခါတိုင်းဖြစ်ပျက်နှင့်။ ဒါကြောင့်အချိန်တိုတောင်း, comandos.O system ကို send and receive ဖို့ပိုမြန်သင်သည်တတ်နိုင်အနီးဆုံး AWS server ကို အသုံးပြု. သင်၏အင်တာနက်နှင့်အတူအောင်းနေချိန်စမ်းသပ်မှုလုပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။